အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအော်တိုအပိုင်း Casting Die China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:သေကာစ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းများ,စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die,လူမီနီယမ် Die ကာစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die > အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအော်တိုအပိုင်း Casting Die
စက် Cast ၏ 2.Global အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ။
3. ကျနော်တို့စာချုပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏ကျယ်ပြန့ဖြည့်ဆည်းဖို့အချို့သောအခြားကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးစက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်။ တဦးတည်းအရင်းအမြစ်နှင့်အလုပ်လုပ်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်တော်မူ၏။
မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပကနေ7ကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးများ၏ 4. ကျေနပ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။
6. ပုံမှန်ခဲကြိမ်အပြည့်အဝ-machine အစိတ်အပိုင်းများကို 1 ကနေ6ပတ်အထိ။
ဖောက်သည်အသစ်ကစီမံကိန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးကူညီရန် 7. ခိုင်ခံ့သောစွမ်းရည်။
8. ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဌာနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လျင်မြန်စွာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီနိုင်ရန်အတွက် 24 နာရီမရရှိနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ Donrex ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများခံစားစတင်ဖို့။
1. ဘယ်လို quotation အရနိုင်မလဲ?
drawing, ပစ္စည်း, အလေးချိန်, အရေအတွက်နှင့်တောင်းဆိုမှုကို: အကိုးကားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါ။
နမူနာ: သင်မှိုအောင်စတင်ပြီးနောက် 25-30 ရက်အတွင်း။ အဆိုပါကတိကျမှန်ကန်အချိန်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်ပါသည်။
အချိန်အမိန့်: 35-40 ရက်ငွေပေးချေပြီးနောက်။ အဆိုပါကတိကျမှန်ကန်အချိန်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်ပါသည်။
TOOLS: TT advanced 100% ။
အဓိကအမိန့်: တင်ပို့မတိုင်မီပေးဆောင်ခံရဖို့ 50% သိုက်, လက်ကျန်ငွေ 50% ။
ဖိုင်ပုံစံ၏ 6. ဘယ်ကြင်နာသင်ဖတ်နိုင်သလဲ
PDF ဖိုင်, ISGS, DWG, အဆင့်, MAX ။
7. သင်တို့ရှေ့မှကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမှတင်ပို့လျှင်, ငါကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကသင်၏တင်သွင်းဖောက်သည်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များရနိုင်ပါသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိသည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှသင်တို့ရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များကိုမပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့ B / L အချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်။
သင်သည်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုရှိပါက pls ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရ
RZ တူညီမျှကိစ္စဖောက်သည်တွေနဲ့တိုင်းဖောက်သည်ပြုမူဆက်ဆံကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နေဖောက်သည်ပျော်ရွှင်နေကြသည်သောအခါ, သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကြီးမားသောထံမှဖြစ်ကြသည်။
သင်တစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုစိန်ခေါ်မှုရှိပါကကျွန်တော်အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းပုံကြမ်း-အဆင်သင့်သို့မဟုတ်နေဆဲအယူအဆအဆင့်ရှိမရှိ, သင့်စီမံကိန်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ယူနိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ရှိသည်။ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်စီမံကိန်းများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများနောက်ဆုံးရေးဆွဲသို့ရှိသူများအတွေးအခေါ်များပြောင်းလဲသင်တို့နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ နောက်ထပ်တီထွင်စီမံကိန်းများအတွက်ကျနော်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီဇိုင်းများ Full-စကေးထုတ်လုပ်မှုများအတွက် optimized နေကြသည်အာမခံပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများအပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။ ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံနားလည်မှု, သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုနှင့်အတူမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မူလကမျှော်လင့်သည်ထက်ပိုမိုထိရောက်အဖြေတွေကိုပေးသူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်? ကျနော်တို့ကရရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ 3D မော်ဒယ်, ခက်မိတ္တူသိထား, ဒါမှမဟုတ်ရေးဆွဲ Pro ကို / E ကိုအတွက်ပြန်ဆို, SolidWorks နှင့် AutoCAD အပါအဝင် formats အမျိုးမျိုးနဲ့အတွက်ရေးဆွဲထားရှိရန်